Antony 5 lehibe mahatonga ahy tsy hampiasa lisitra isaky ny paositra. | Martech Zone
Antony 5 lehibe mahatonga ahy tsy hampiasa lisitra isaky ny paositra.
Alarobia, Oktobra 11, 2006 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Sitrana aho avy amin'ny zavatra inoako fa aretin'andoha migraine voalohany androany. Ka manantena aho fa tsy hanao ratsy amin'ity lahatsoratra ity… tsy fanafihana izany fa fahalianana te hahafantatra fotsiny.
Raha mbola tsy nijery ny bilaoginy ianao taloha, dia misy fampahalalana marobe ao ProBlogger. Ny tsy azoko farany tato ho ato dia hoe nahoana ny ankamaroan'ny lahatsoratra tsirairay dia tokony ho karazana lisitra?
Misy tombony ve ny lisitra ao anaty atiny? Nametraka lisitra tao anaty atiny aho teo aloha, saingy rehefa nieritreritra aho fa nanome tari-dalana izy ireo na teboka bala fotsiny izay tiako hampitaina. Fantatro fa mitady ny 'Top 10' sy ny 'Top 100' ary ny isa iraisana iraisana ho an'ny lisitra ny olona, ​​saingy tsy hitako ny 'Top' ao amin'ny lisitry ny ProBlogger sasany.
Saingy, saika ny lahatsoratra rehetra dia toa misy lisitra maromaro. Amin'ny fomba ahoana koa?
Ireto ny Top 5 Antony tsy ampiasako lisitra isaky ny lahatsoratra:
Tsy mamaky toy ny resaka izany.
Indraindray ny lisitry indraindray… mety hanana teboka tokana na teboka zato ny olona iray amin'ny lohahevitra rehetra. Nahoana no zava-dehibe ny fanisana?
Ny fampiasana diso tafahoatra ny lisitra misy isa dia toa tsy mahomby… raha tsy lisitra ny bilaoginao, mazava ho azy.
Ny entana lisitra matetika dia fanambarana fohy, ary aza mamela toerana betsaka hilazana na hiresahana.
Indraindray, ny entana farany dia toa eritreretina… mba hanandramana tonga amin'ny isa ilainao fotsiny. Mila 5 aho.
Vaky… tsy misy foo-foo azafady.
Button RSS lehibe indrindra eto an-tany? Heveriko fa tsy izany!
11 Okt 2006 amin'ny 9:10 PM
Lisitra mahafinaritra. Ireto misy eritreritra vitsivitsy:
1. Tsy mampiasa lisitra isaky ny lahatsoratra aho - amin'ireo 10 farany nataoko dia 2 ihany no tena nisy lisitra (ny iray hafa nanonona lisitra iray izay nosoratan'olon-kafa)
2. rehefa nilaza an'izany - tiako ny fomban'ny lisitry ny lahatsoratra. Hitako fa mora soratana izy ireo ary mora vakina. Amin'ireo lahatsoratro ireo lisitra ireo matetika no be mpitia indrindra sy be mpiorina indrindra.
3. Olona lisitra amin'ny fiainana tena izy aho - ataoko mandritra ny tontolo andro izy ireo mba hanampiana ahy handamina ny tenako - ka heveriko ho endrika fanoratana voajanahary ho ahy koa izany.
4. ny hevitrao momba ny singa lisitra izay fanambarana fohy dia marina - na izany aza ny lahatsoratra soratako izay soratako amin'ny ankapobeny dia misy lohateny ary avy eo ny andininy iray aorian'izy ireo. Amin'ny lafiny iray dia tena mitovy amin'ny sanganasa soratako izy ireo miaraka amina fanambarana fampidirana amin'ny fiandohan'ny andianteny tsirairay miaraka amin'ny fanazavana momba azy avy eo. Ny tena maha samy hafa azy fotsiny dia ny fanamafisana ny isa na ny isa ary ny loha-hevitra lehibe dia sahy hampandeha azy kokoa.
5. iray amin'ireo tombony lehibe indrindra amin'ny lisitra dia scannable izy ireo. Ny fandalinana ny famakiana an-tserasera dia mampiseho fa ny ankamaroan'ny olona dia mihetsika manohitra ary tsy mamaky andian-tsoratra maro sy scan ny atiny ho an'ireo hevi-dehibe alohan'ny hiverenany hamaky lahatsoratra. Hitako fa manampy amin'izany ny endrika lisitry.
6. Tsy dia tena mitady lisitra ihany koa aho mba hahazoana nomerao aho ary vokatr'izany dia nanoratra lisitra 9, 12 ary isa hafahafa hafa. Ireo lahatsoratro roa farany dia voahodina tsara manodidina ny lisitra '10' saingy mora kokoa noho ny zava-drehetra - Manoratra ny lahatsoratro aho ary avy eo miverina manisa ny isaako amin'ny farany ary mifikitra amin'izay hitako.
Mazava ho azy - handray ny hevitrao aho. Fantatro fa mety ho diso tafahoatra ny lisitra ary fantatro izany - vokatr'izany dia manandrana mifangaro kely aho. Misaotra ny eritreritrao - tsy noraisina ho fanafihana mihitsy fa fitsikerana mahasoa - misaotra.
11 Okt 2006 amin'ny 9:25 PM
Ity dia fanehoan-kevitra tena tsara izay manampy ahy hahatakatra kely. Raha tsy nolazaiko teo aloha izany, dia mpankafy ny bilaoginao aho. Ny iray amin'ireo zavatra tiako amin'ny bilaoginao dia ny hoe toa fitaovana tany am-boalohany. Rehefa mandinika ireo fahana nataoko aho tamin'ny famerenana ireo lahatsoratra (androany dia ny fanakambanana Google Writely and Spreadsheet), mazàna amin'ny lohahevitra vaovao ny anao.
Misaotra betsaka anao nanokana fotoana hamaliana ny fidirako! Mampientam-po ny fitsidihan'ny “ProBlogger” azy.
Ary - tiako be ny nitanisanao ny valinteninao. 🙂
11 Okt 2006 amin'ny 10:09 PM
misaotra Doug - nieritreritra fa lisitra ny fanehoan-kevitra 😉
Miezaka ny hitazona ny zavatra tany am-boalohany tao amin'ny PB aho - na dia misy aza ny andro izay tsy maintsy handrakofana ny vaovao heveriko.
misaotra ny tamberina - Tena tiako io.